Eyona ZirconiaSlidePlate, iRingi (PMDQuality) yoMvelisi kunye neFektri | Funmeet
Ngokwesiseko se-PMO1 uthotho lweemveliso zodongwe ezihlanganisiweyo ze-Zro2, ngokuqhubekeka kokusebenza okukhethekileyo kwetekhnoloji, i-Fangming New Material ngempumelelo i-R & D, ivelise uthotho lwe-PMD yokusebenza okuphezulu kwe-Zro2 edityanisiweyo yodongwe weSilayidi, iRingi, Faka. Banokucoceka okuphezulu, ukonyusa okunamandla, ukhukuliseko lomhlaba, ukoyikisa kukothuka, ukumelana nokunxiba okuphezulu, ubomi obude bokusebenza. Ubomi babo bobuchwephesha buphakanyiswa nge-30-50% ngokusekwe kuthotho lweemveliso ze-PMO1 zikwimeko efanayo yokusebenza.
I-PMD Series Zro2 Composite Slide Plate, iZro2 Ring, Faka
Ukudityaniswa kwedatha yeRaman kunye nohlalutyo lwe-thermogravimetric (TGA) kungqina ukuba ukudityaniswa kwee-organic macromolecule kwiindawo zomdongwe kuyenzeka. Uhlalutyo lomatshini olunamandla (DMA) lwenziwe ukusuka kwi-100 ukuya kwi-50 ° C; ukongezwa kweceramic kwandisa imodyuli yokugcina ', ngakumbi xa kugqityiwe ukuzaliswa. Xa kuthelekiswa ne-PP kunye ne-thermoplastic vulcanizate (TPV), ukwanda okuphezulu kwe-thermal kubonakala emva kokongezwa kwe-ceramic filler, esisiphumo sokwenza ivolumu yasimahla. Imodyuli eqine yezihlanganisi imalunga namaxesha e-1.2 e-TPV emsulwa, ukonyuka kobungqindilili obubangelwe ngokucacileyo yiceramic. Indawo eqhekekileyo ibonisa ukungqinelani okubuthathaka kwamasuntswana okuzalisa kwimatrix. Kwisampulu equlathe i-filler eguqulweyo, i-tensile deformation ihamba ngematriki yepolymer.
I-ceramic composite iyakwazi ukumelana namaqondo obushushu angaphezu kwe-2200 F rhoqo ngaphandle kokuqhekeka ngenxa yokothuka kobushushu. Umdibaniso unewebhu yokomeleza imicu; kunye ne-matrix ebaluleke kakhulu kwiwebhu emva kwenqanaba lokudubula. I-matrix yenziwa ngeenxa zonke kwiwebhu ngokumitha i-web nge-sol ene-alumina kwaye, kwezinye iimeko, ii-oxides zomhlaba ezinqabileyo, kunye nokudubula okudityanisiweyo emva kokumitha. Iwebhu inokuba lilitha elinamacala amathathu orthogonal yokuluka kwemicu yokomeleza, apho imicu iyinqanaba lotshintsho alumina. Ukudityaniswa kukhululekile ngaphandle kweqela I kunye neqela II lesinyithi kunye notshintsho lwesinyithi. Umdibaniso unokusetyenziswa njengezitena ezirholayo okanye ulwelwesi kwaye unokusetyenziswa njengesixhobo sokubambelela ngenxa yobume bemichiza obungasebenziyo.
Egqithileyo I-ZirconiaSlidePlate, iRingi (PM01Quality)